Aoka amin'izay ty faritra mangataka amin'ny fitondrana foibe ity.
dimanche, 13 septembre 2020 19:59
Ianareo faritra no manome harena sy vokatra izay omena tantanan'ny fanjakana foibe, dia ianareo indray no mitalao amboary ny Epp, CEG, lalana, hopitaly, fandriam-pahalemana.
Raisiko ohatra ny faritra SAVA:
La vanille 2000tonnes na 2 millions kg no novokarinareo nahondrana tany ivelany taona 2018-2019.
Raha 300dollars Usd ny 1kg, dia 600 millions de dollar zany ny vola vahiny nampidirinareo. Mihoatra ny fanampiana sy trosa omen'ny mpampindram-bola ivelany antsika.
Dia lalana Ambilobe - Vohemar, na Maroantsetra - Antalaha - Mandritsara dia angatahanareo?
Mbola ny foibe, izay masondreo tsary nahita la vanille no manapaka ny momba ny la vanille.
Faritra DIANA, tsy resahiko ny ranomasina, ny volamena 500tonnes ao Betsiaka, izay ny Sinoa no mitrandraka azy, ary hellico isan-kerinandro maka volamena ao.
Faritra Anôsy sy atsimo rehetra iny, na ny rano sotroina ranopotaka, nefa manana uranium, mica, fasi-mainty, 1% fotsiny ristourne omen'ny mpitrandraka vaventy, 99% an'azy.
Ny faritra Atsimo atsinanana, manana bois de rose, la vanille, litchi, kafé, jirofo, lohamasinina efa montraka tsy ilain'olo any ivelany omena anareo dia merci monsieur. Nefa vola sy harenanareo mahazo TGV. Aiza koa hisy an'izany hoe misy quota ny isan'ny sambo mitondra litchi ka rehefa feno ny quota dia avela ho lo, na fanamboarana jus sy confiture aza tsy misy.
Ny faritra andrefana, ny makamba sy crevette, ny pétrole, i Bemolanga, ny aty Antananarivo no manapaka fa tsy mety ampiasaina ny solika mavesatra ao Tsimiroro, dia io fa matory ao antokotany ao aby 160 000 barils de fuel. Misy réserve 25 milliards de dollar ao, efa vita contrat fa niniana ni bloquer-na dia rava tsy mamokatra izao ny orinasa.
Bois de rose efa valeur 4 milliards de dollars, andrasana fanjakana foibe no anapaka ny fampiasana azy na tsia, nefa ny mponina na sekoly iray tsy mitafo sy vita amin'ny kinininy aby, fa mbola mandamaka an-tany ny mpianatra.
Ny etsy Antsirabe, Itasy, Mahitsy, Ambatondrazaka, Marovoay, Morondava, Fianarantsoa, vokatra ny vary, ny fiompiana akoho sy atody, ny famokarana ronono, blé, fa dia mbola ny fangatahana no betsaka anamboarana ireo barazy samihafa mampidi-drano.
Tsy misy faritra na iray mahantra tsy manan-karena izany eto, fa tezaina ahantra sy angataka lava, tsy afaka hisaina ny fampandrosoana ao aminy.
Dia tsipazana lalana pavé 1km ianareo dia faly, ary misaotra tsy misy fiafarany.
Ianareo mpiasa sasany amin'ny TVM moa efa mampandoha mijery anareo sy ity fanafosafoana mamoafady ataonareo ity.
Mba tontotrin-draha, fa olo efa tonga la lune amin'ny volanareo, andre mbo mangataka tsy mahay fiafarany.
Koa misy zanaka 6 efa mitokan-trano, zanaka Ray aman-dreny, akory hozy vadinao sy zanakanao, raha karamanareo alefa amin'ny babanao sy mamanao aloha, dia babanao no andefasana fangatahana andefa vola fa mila aloa Jirama, hofan-trano sy écolage mpianatra ary karaman'ny mpiasa. Babanao amin'io mbo manao 2e bureau koa, ary mi roule amin'ny 4x4 amin'ny volanao.
Tsy tokony samy hanapa-kevitra amin'ny fampandrosoana ny tokatranony sy ny fampiasana ny volany ve, fa izy 6 samy manome anjara kely ho an'ny Ray aman-dreniny, ary izay sahirana amin'izy 6 no ampian'ny Ray aman-dreny, na hanaovan'ireo 5 hafa koti kota manokana.
Mampisaraka ny fianakaviana ve izany, raha samy mihary nefa mifanohana eo anatrehan'ny Ray aman-dreny izy 6 zanany? Tsy ho reharehan'ny Ray aman-dreny eo anatrehan'ny fianakaviana hafa ve mahita ny zanany 6 samy tafita, ary hanampy azy ihany koa amin'izay pension efa raisiny.
Bonne nuit aby.